Shopify kana PrestaShop, ndeipi chikuva chiri nani kune yako ecommerce | ECommerce nhau
Panguva ino, maviri epuratifomu akakosha izvo zviripo kuita tsika yeE-commerce kana zvemagetsi zvekutengeserana. Iwo ndiwo mapeji ewebhu e Shopify kana Prestashop, masisitimu akakosha uye anoshandiswa.
Pane hurukuro dzakawanda pamusoro ipuratifomu ipi inonyanya kukosha kana yakanakisa kupinda munyika yeE-commerce.
Ose masevhisi anopa akanakisa zvishandiso iine hunhu hunodiwa kuitira kuti titange chirongwa chebhizimusi nemikana mikuru yekubudirira.
Nekudaro, zvinoenderana nerudzi rwemutengesi, chikuva chimwe nechimwe chinotipa yakasarudzika uye yakasarudzika hunhu izvo zvinoita kuti ive sarudzo yakanaka yekuita bhizinesi redu pamhepo.
Tevere isu tichaongorora zvinhu uye hunhu hukuru hwemapuratifomu maviri aya.
Kuti isu tinogona kuyera zvakasiyana chii chichava icho sarudzo yakanakisa yekupinda munyika yekutengesa kwepamhepo.
1.1 Pakati payo makuru maficha uye mabhenefiti
1.1.1 Zvimwe zvePrestaShop Zvimiro
2.1 Pakati payo makuru maficha uye mabhenefiti
2.1.1 Zvimwe Shopify Zvimiro
3 PrestaShop kana Shopify
3.1 Pros uye Cons of PrestaShop kana Shopify
4 Tinogona kutaura nezve PrestaShop kana Shopify
Prestashop ndeye e-commerce chikuva iyo yakavambwa muna 2007. Kuti ive munguva pfupi kwazvo imwe yeanonyanya kufarirwa pamusika uye imwe yeiyo mhinduro dzakanakisa dzeE-commerce.
Nenzira yekuti nhasi ine zvinopfuura 165.000 zvitoro zvepamhepo zvakaparadzirwa kutenderera nyika zana nemakumi mashanu neshanu, uye zvichikwanisa mumitauro inopfuura makumi matanhatu.
Pakati pake main maficha uye mabhenefiti
Nzvimbo yacho inotibvumidza isu kubata ese akakosha mabasa eE-commerce, senge mutengi uye manejimendi ekutenga, pamwe nekatalog uye manejimendi manejimendi.
PrestaShop ine yakavhurwa sosi CMS system, Kutenda kwazvinotibvumira kurodha pasi, kuisa uye kugadzirisa yedu online chitoro zvachose mahara.
Pakati pemabasa ayo akasiyana, inotibvumidza sarudza kubva pamazana anosvika 1500 matemplate, kuitira kuti tigare tichigona kuve neakanyanya dhizaini yekupa zvigadzirwa zvedu
Ndicho software inoshanduka-shanduka yevashandisi vakasiyana, uye inopa yakaderera kushandiswa kwesystem zviwanikwa iko kwainoiswa, uye manejimendi ayo ndeye 100% inogadziriswa uye inogadziriswa.
Mamwe maficha e Prestashop
Pakati pezvakawanda zvayakanakira, ine mabasa ayo tibvumire isu kugadzirisa ma URL, pamwe nekugadzirisa zvinyorwa nemazita. Kunze kweizvozvo isu tinogona zvakare kubata iyo intuitive interface iyo inogara iri nyore uye inowanikwa kushandisa.
Nekushanda kwayo chaiko. Izvo zvinongoda kuve ne Apache 1.3 dura rewebhu, kana kuti gare gare, izvo zvichatibvumidza isu kuti tishandise zvakanyanya sisitimu yako, iyo inotipa isu kusvika pamakumi matatu nematanhatu mabasa akasiyana.
Inotibvumira - gadzirisa mashandisiro anoita hukama hwevatengi, pamwe nemirairo yepamberi uye huwandu.
Iyo zvakare ine bhenefiti ye maneja Kushambadzira kune yako E-commerce, senge kukwidziridzwa uye kuita kwakakosha.
Kugamuchira kubhadhara, PrestaShop inoita kuti kudyidzana kwechitoro kuitike. Izvo zvatinogona kugadzirisa zvinhu zvakasiyana zve: VAT, mari, mutauro uye data.
Shopify ikambani yeCanada inogara muOttawa, yakavhurwa muna 2004, iyo yaunogona kugadzirisa kubhadharira pamhepo uye akasiyana masosi masosi ekutengesa.
Parizvino ine zvitoro zvinodarika mazana matanhatu ezviuru zviripo uchishandisa chikuva chayo. Iine vanopfuura mamirioni vanoshandisa vashambadzi nekutengesa kwakagadzirwa kusvika pahuwandu hwakazara hwemamirioni mazana matanhatu emamiriyoni mazana matanhatu. Izvo zvinoita kuti ive imwe yemapuratifomu akasarudzika evamabhizimusi kutenderera pasirese.
Pakati payo makuru maficha uye mabhenefiti
Uchishandisa izvi software inotibvumidza isu kubata bhizinesi redu mune anosvika zana matemplate akasiyana. Icho chiri chakanakisa chishandiso chekugara uchisimbisa akakodzera magadzirirwo erudzi rwezvigadzirwa zviri kutengeswa. Saizvozvo, tinogona zvakare kushandisa edu magadzirirwo.
Iyo control panel iyo yainobata yakanyatso kukwana uye inoshanda chaizvo mushe.l, izvo zvinoita kuti zvigoneke chero nguva kugadzira akasiyana zvipo kana zvakare kuwedzera chigadzirwa chitsva zviri nyore kwazvo uye zvine mutsindo.
El Shopify rutsigiro sevhisi inoshanda maawa makumi maviri nemasere, Mazuva manomwe pasvondo, kutibatsira nekutitsigira nemibvunzo kana zvinonetsa nguva dzose. Kuti tikumbire sevhisi iyi isu tine nzira dzakasiyana dzekuwana. Chero kushevedza timu yakasarudzika kana kutumira email patinoratidza kusahadzika kwedu kwese.
Shopify inoita kuti zvikwanisike gadzirisa yega yega chinhu chechitoro nenzira yakapusa uye inoshanda. Nenzira iyi tinogona kugara tichivimbisa kuti bhizinesi redu repamhepo hariratidze chero mhando yematambudziko. Sezvo pachikuva ichi zvakare chichiita kuti zvikwanise kukurumidza kugadzira akasiyana mablog mablog.
Mamwe maficha e Shopify
Izvo zvine vashandi vane hunyanzvi uye vakanyatsodzidziswa, kutungamira mutengi nhanho nhanho. Saka unogona kugadzirisa chitoro chako pasina chinonetsa.
Na Shopify, unogona gamuchirai mubhadharo inosvika makumi manomwe emari dzakasiyana. Neiyi nzira, isu tinogona kuita kutengesa mune dzakanyanya kutengeserana nyika dzepasirese, tisinganetseke nezve maitiro ekuita akaringana mareti ekuchinjana. Uye pamusoro pezvose, pasina vatengi vachifanira kunetseka nezve idzi nyaya. Izvi zvichatibvumidza kuvimbisa kugutsikana kwako uye kuvimbika kubhizinesi redu, nekuve nebasa rakanakisa, nzira dzekubhadhara dzinowanikwa uye chivimbo icho chikuva chinopa nenzira dzayo dzekutengesa dzinoshanda.
La nyore interface Nekaundi yeShopify, zvinoita kuti zvikwanisike kubata zvigadzirwa zviri nyore kwazvo, kuti tikwanise kugara tichiisa mafoto, kuwedzera zvigadzirwa zvitsva, kugadzirisa zvinyorwa zvedu uye mamwe maitiro mazhinji. Izvo zvichatibvumidza kumhanyisa bhizinesi redu sevashandi vechokwadi. Uye zvakare, ine iyo chirongwa chemutauro "Liquid", yakasarudzika kuShopify
Shopify ane iyo maturusi akanaka ekugadzirisa mabhizinesi epamhepo, kuitira kuti chimiro chemirairo yese chigare chichiwonekwa. Semuenzaniso, tinogona kuongorora nhoroondo izere yemirairo, kuti tive nehukama hwakanakisisa nevatengi uye tinotungamira mushambadziro wakakodzera wekushambadzira.
Shopify inopa a 14-zuva yemahara muyedzo nguva, zvakakwana kuti tikwanise kushandisa zvakanakisa zvepuratifomu iyi pasina muripo. Uye saka tinogona kuita sarudzo yedu pasina kuzvipira kwemari, zvakadzikama uye nezvose zvayakatobatsira zvakatodzidzwa panguva yekuyedzwa.
PrestaShop kana Shopify
Sarudza yakanakisa e-commerce chikuva pakati Prestashop kana Shopify Icho chiratidzo icho chinogona kuve chakaoma kana icho chinangwa chichive chinangwa.
Ichokwadi ndechekuti for tsanangura sarudzo yakanakisa, mushandisi anofanira kurema zvinoenderana nechavo chimiro.
Ndiro chikuva icho chinokupa iwe chakakodzera maturusi uye chinokupa iwe neakanyanya kunaka mabhenefiti uye mabhenefiti maringe nekushandisa iwe kwaunofunga kuishandisa kwayo.
Naizvozvo, pazasi tiri kuenda kuita a kuenzanisa kuongorora pakati pemapuratifomu maviri, ichitaura nezve zvayakanakira nezvayakaipira zveimwe neumwe maererano nemumwe wayo.
Pros uye Cons of PrestaShop kana Shopify
Nezve SEO zvinangwa (search engine optimization), zvinozivikanwa kuti Shopify haina kushomekapanguva PrestaShop inobatsira nzvimbo iri nani ye e-commerce muzvinjini zvekutsvaga.
Kutenda kwayakavhurwa sosi, PrestaShop inobvumira nyore kugadzirisa uye kugadzirisa yetemplate kupfuura iyo iwe yaunogona kuita neShopify. Izvo hazvingoratidzi chete kuoma kukuru kuita shanduko, asi zvakare, mune dzimwe nguva zvinongogoneka kuzviita kuburikidza nemaapplication ane imwezve mari.
Zvinoenderana nedhata rakapihwa neiyo GetApp saiti, Shopify inopa mubatanidzwa kusvika anosvika makumi maviri nemaviri nemaviri mapuratifomu ekutengesa, nepo chikamu chayo, PrestaShop isinganyatsobatanidza makumi mashanu nemapuratifomu aya.
PrestaShop ndeyemahara software, (iwe unongofanira kubhadhara mari shoma yekutambira), asi kana iri Shopify, kana iine mari yemwedzi nemwedzi inoenderana nechirongwa chakabvumiranwa.
Ose PrestaShop uye Shopify vane basa rakanaka kwazvo rekutsigira kune mutengi. Zvisinei mune iyo nyaya ye Shopify, pamusoro pebasa rerunhare, zvakare ine yakasangana online chat kupindura mibvunzo maawa makumi maviri nemana pazuva.
Kana uchibvumirana zvirongwa zvekutanga zveShopify, izvi zvinopomera komisheni pakutengesa. Panguva yekutengesa, PrestaShop haishandise chero mhando yemubhadharo.
Tinogona kutaura nezvazvo PrestaShop kana Shopify
Mushure mekuongorora zvakakosha zvinhu uye maficha akatenderedza maviri akanakisa uye anonyanya kushandiswa E-commerce mapuratifomu zviripo nhasi.
Tinogona kutaura kudaro hapana anokunda zvakajeka, sezvo zviri pachena kuti hunhu hwakanakisa hwese hwese software hunoshandiswa nevatengi chaivo nevashandisi.
Nekudaro, nepo vamwe vachizowana zvirinyore uye zvinoshanduka shanduka kushandiswa kwePrestaShop, vamwe vanozokoshesa iyo mazhinji maficha uye kusangana iwe kwaunogona kuwana neShopify kunyangwe iko kwekutanga kudyara kwainomiririra.
Maitiro ese ari maviri zvishandiso zvakanaka kune vezvemabhizimusi vari kupinda munyika ye e-commerce kekutanga.
Chokwadi ndechekuti sarudzo yekupedzisira yekuti ndeupi ari nani inozopedzisira yaenderana nezvinangwa zvinofanirwa kuzadzikiswa, kungave munguva pfupi, yepakati kana kunyange yakareba. Izvo zvichave zvakakosha kana zvasvika kune gadzira chitoro chepamhepo, iro rinogona kunge riri bhizinesi rakaomarara kana iwe usina rutsigiro rwe PrestaShop kana Shopify.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Shopify kana PrestaShop, iyo chikuva chiri nani kune yako ecommerce
Gadza PayPal mu PrestaShop